HAMAKY AMIN'NY TENY Acholi Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Armenianina Aukan Aymara Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Baoulé Bassa (Cameroun) Batak (Karo) Batak (Toba) Bichlamar Bicol Boligara Boulou Catalan Cebuano Chichewa Chin (Hakha) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chokwe Chol Chuuk Cinghalais Cinyanja Dangme Danoà Drehu Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Ga Goun Grika Groenlandey Guarani Géorgien Haoussa Hebreo Herero Hiligaynon Hindi Hmong (Fotsy) Holandey Hongroà Iban Ibanag Ibo Icibemba Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Javaney Kabiyè Kambôdzianina Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Koreanina Kreôla Maorisianina Kreôla any Haïti Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwangali Kwanyama Letonianina Lhukonzo Lingala Litoanianina Luganda Lunda Luo Luvale Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mam Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Mapudungun Marshall Masedonianina Mazateky (Huautla) Mbunda Mizo Mongol Mooré Myama Nahuatl (Afovoany) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Ngangela Nias Niue Norvezianina Nzema Népali Oromo Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Pendjabi Persianina Pidgin any Amin'ny Nosy Salomon Poloney Ponape Portogey Portogey (Portogaly) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Rarotonga Romanianina Rosianina Runyankore Rutoro Samoanina Sango Saramaccan Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Silozi Slovaky Slovenianina Soedoà Sranan Tongo Swahili Swahili (Congo) Swati Tagalog Tahisianina Tailandey Tamoul Tatar Tchouvache Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tiv Tok Pisin Tongan Totonac Tseky Tshwa Tsonga Tuvalu Twi Tzotzil Umbundu Urhobo Uruund Venda Vietnamianina Wallis Wayuunaiki Wolaita Xhosa Yorobà Zandé Zapoteky (Andilan-tany) Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal Éwé
MISY MITENY HOE TSIA. Nilaza ny dokotera iray hoe toy ny mampiasa boky momba ny simia tamin’ny 1924 ianao mba hampianarana ankizy amin’izao, raha ny Baiboly no hakanao tari-dalana. Mety hisy hiteny aza hoe tsy bokina ordinatera tranainy be mihitsy no hakanao hevitra, rehefa hampiasa ordinatera nivoaka farany ianao. Raha tsorina, dia misy mihevitra fa efa lany andro ny Baiboly.
Mbola mila an’io boky tranainy be io ve isika, nefa ny teknolojia aza efa mandroso be? Tsy hita isa izao ny tranonkala manome torohevitra ao amin’ny Internet. Maro be koa ny fandaharana amin’ny tele ahitana mpanoro hevitra, toy ny psikology sy ny mpanoratra boky. Manginy fotsiny ny boky misy torohevitra, izay ahazoan’ny mpamokatra azy ireny vola tsy toko tsy forohana.
Mbola ilaina àry ve ny Baiboly, nefa izy io aza efa ho 2 000 taona lasa no vita? Mitombina ve ilay hoe toy ny mampiasa boky momba ny simia na bokina ordinatera tranainy be isika rehefa mampiasa Baiboly? Tsia. Ny teknolojia sy ny siansa mantsy no miova haingana, fa ny zavatra tena ilain’ny olona kosa tsy miova. Mbola te ho afa-po amin’ny fiainana foana ny olona, te ho sambatra sy tsy hanana ahiahy, hifandray tsara amin’ny fianakaviany, ary hana-namana tsara.
Afaka manampy amin’izany ny Baiboly sady mahavita mihoatra lavitra, na dia efa tranainy be aza. Voalaza ao koa hoe avy amin’ny Mpamorona antsika izy io. Misy tari-dalana hanampy antsika amin’ny lafim-piainana rehetra sy hiatrika ny olana rehetra ao. (2 Timoty 3:16, 17) Tsy mety lany andro koa ny toroheviny! Hoy mantsy ny Hebreo 4:12: ‘Velona ny tenin’Andriamanitra.’
Misy torohevitra tena tsara sy mahasoa antsika tokoa ve ao amin’ny Baiboly, sa boky efa lany andro izy io? Ho hitanao ny valin’izany rehefa mamaky an’ity gazety ity ianao. Laharana manokana ity Tilikambo Fiambenana ity sy ireo manaraka, satria foto-kevitra iray ihany no velabelariny.
Nahoana ny olona sasany no nanao vivery ny ainy mba hahazoana Baiboly sy hamakiana azy io?
Ny Baiboly no boky be mpanana indrindra eran-tany. Diniho ny zavatra sasany tsara ho fantatra momba azy io.